Manàna Finoana ary Saintsaino ny Fampanantenan’Andriamanitra
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Cinyanja Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Letonianina Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe Mongol Mooré Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Sango Serba Serba (Soratra Romanina) Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Yorobà Zapoteky (Andilan-tany)
‘Tsy hitany ny fahatanterahan’ny fampanantenana, fa tazany lavitra.’—HEB. 11:13.
Inona no fahaizana nomen’i Jehovah antsika ka manampy antsika hanana finoana?
Ahoana no ahafantarantsika fa nahazo sary an-tsaina ny valisoany ny mpanompon’i Jehovah tsy mivadika fahiny?
Nahoana no mahasoa antsika ny miresaka momba ny fanantenantsika?
1. Nahoana no mahasoa antsika ny maka sary an-tsaina ny zavatra tsy hitantsika? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
AFAKA maka sary an-tsaina ny zavatra tsy hitantsika isika, ary fanomezana avy amin’Andriamanitra izany. Manampy antsika hanana fanantenana sy hieritreritra mialoha izay hataontsika izany. Mahalala ny hoavy i Jehovah ary matetika no lazainy mialoha ao amin’ny Soratra Masina izay hitranga. Afaka maka sary an-tsaina ny hoavy àry isika ary manampy antsika hanana finoana izany.—2 Kor. 4:18.
2, 3. a) Nahoana no mahasoa ny maka sary an-tsaina zavatra iray tena hisy? b) Inona no fanontaniana hodinihintsika ato?
2 Mety tsy hitranga mihitsy anefa ny zavatra alaintsika sary an-tsaina. Mety hieritreritra, ohatra, ny ankizivavikely iray hoe mitaingina lolo izy. Tsy hisy mihitsy anefa izany. Zavatra tena hisy kosa no nosaintsainin’i Hana, renin’i Samoela. Nalainy sary an-tsaina foana hoe iny izy fa nanatitra an’i Samoela tao amin’ny tranolay mba hanompo tao. Efa tapa-kevitra ny hanao an’izany izy ka vao mainka vonona hanatanteraka ny teniny rehefa nisaintsaina an’ilay izy. (1 Sam. 1:22) Zavatra tena hitranga koa no eritreretintsika rehefa maka sary an-tsaina ny fampanantenan’i Jehovah isika.—2 Pet. 1:19-21.
3 Azo antoka fa naka sary an-tsaina ny fampanantenan’i Jehovah ny mpanompony maro fahiny. Nahoana no nahasoa azy ireo izany? Nahoana no mahasoa antsika ny misaintsaina ny zavatra tsara ampanantenain’i Jehovah ho an’ny olona mankatò?
TOY NY NAHITA NY HOAVY IZY IREO KA NATANJAKA NY FINOANY
4. Inona no nety ho nahatonga an’i Abela hino hoe hisy hoavy tsara kokoa?
4 I Abela no voalohany nino ny fampanantenan’i Jehovah. Fantany ny tenin’i Jehovah tamin’ilay menarana hoe: “Hataoko mifandrafy ianao sy ny vehivavy, ary ny taranakao sy ny taranany. Hanorotoro ny lohanao izy io, ary ianao kosa handratra azy eo amin’ny voditongony.” (Gen. 3:14, 15) Tsy hain’i Abela hoe ahoana no hahatanterahan’io fampanantenana io. Nety ho nieritreritra be momba azy io anefa izy. Takany àry fa tsy maintsy hisy olona ‘haratra eo amin’ny voditongony’, mba ho lasa lavorary toa an’i Adama sy Eva tamin’ny mbola tsy nanota ny olombelona. Tsy fantatsika izay tena nosaintsainin’i Abela momba ny hoavy. Nino ny fampanantenan’i Jehovah anefa izy, ka neken’i Jehovah ny fanatitra natolony.—Vakio ny Genesisy 4:3-5; Hebreo 11:4.
5. Inona no vokany rehefa naka sary an-tsaina ny hoavy i Enoka?
5 Tena nino an’Andriamanitra i Enoka na dia niteny zavatra manafintohina hanoherana an’Andriamanitra aza ny mpiara-belona taminy. Sahy nilaza an’ity teny nasain’i Jehovah nolazainy ity izy: “Efa tonga i Jehovah, miaraka amin’ny anjeliny masina an’alinalina, mba hampihatra didim-pitsarana amin’ny rehetra, sy hanaporofo fa meloka izay rehetra tsy natahotra an’Andriamanitra. Meloka izy ireny noho ny asa ratsy rehetra nataony tamin-karatsiam-panahy, sy noho ny teny manafintohina rehetra nentin’ny mpanota hanoherana an’Andriamanitra, dia ireo mpanota tsy matahotra azy.” (Joda 14, 15) Nanam-pinoana i Enoka ka azony an-tsaina hoe hisy tontolo iray feno olona matahotra an’Andriamanitra.—Vakio ny Hebreo 11:5, 6.
6. Inona no nety ho noeritreretin’i Noa foana, taorian’ny Safodrano?
6 Nanam-pinoana i Noa ka voavonjy tamin’ny Safodrano. (Heb. 11:7) Ny finoany koa no nahatonga azy hanao sorona biby, taorian’izay. (Gen. 8:20) Toa an’i Abela, dia azo antoka fa nino izy hoe mbola ho afaka amin’ny ota sy fahafatesana ny olombelona. Niharatsy ny fiainana taorian’ny Safodrano. Nanjaka i Nimroda ary nanohitra an’Andriamanitra. (Gen. 10:8-12) Mbola nanana finoana sy fanantenana anefa i Noa. Azo antoka hoe nampahery azy ny nieritreritra fa tsy hisy intsony ny mpitondra ratsy fanahy sy ny ota ary ny fahafatesana, indray andro any. Toy ny efa mahita an’izany hoavy tena tsara izany koa isika ary efa tena akaiky ilay izy.—Rom. 6:23.
TOY NY EFA TANTERAKA NY FAMPANANTENANA
7. Hoavy manao ahoana no nety ho nosaintsainin’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba?
7 Nety ho nisaintsaina ny hoavy mahafinaritra niandry ny taranany i Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Nampanantena azy ireo mantsy i Jehovah fa amin’ny alalan’ny taranak’izy ireo no hitahiana ny firenena rehetra. (Gen. 22:18; 26:4; 28:14) Ho maro be ny taranak’izy ireo ary honina ao amin’ilay Tany Nampanantenaina. (Gen. 15:5-7) Nanam-pinoana ireo lehilahy natahotra an’ Andriamanitra ireo ka toy ny hitany mandova an’ilay tany sahady ny taranany. Tsara ho fantatra fa taorian’ny nanotan’i Adama sy Eva dia efa nanome toky ny mpanompony tsy mivadika i Jehovah hoe mbola hahafinaritra indray ny fiainana.
8. Nahoana i Abrahama no tena nanam-pinoana ka nahavita zavatra miavaka?
8 Azo inoana fa naka sary an-tsaina an’izay nampanantenain’Andriamanitra i Abrahama, ary tena nino an’izany ka nahavita zavatra miavaka. Milaza ny Baiboly fa ‘tsy nahita ny fahatanterahan’ny fampanantenana’ i Abrahama sy ny mpanompon’i Jehovah hafa. ‘Tazan’izy ireo lavitra kosa izany ka faly niandrandra izany izy ireo.’ (Vakio ny Hebreo 11:8-13.) Efa imbetsaka i Abrahama no nahita fa mitana ny teniny foana i Jehovah ka tena natoky izy hoe ho tanteraka izay rehetra nampanantenainy.
9. Nahoana no nahasoa an’i Abrahama ny finoany ny fampanantenan’i Jehovah?
9 Vao mainka tapa-kevitra hanao ny sitrapon’i Jehovah i Abrahama noho ny finoany. Niala tao Ora izy ary tsy nety nanorim-ponenana tany amin’ireo tanàna tao Kanana. Ho rava toa an’i Ora mantsy ireny tanàna ireny, satria tsy nanompo an’i Jehovah ny mpanjakany. (Jos. 24:2) “Ilay tanàna manana fototra tena izy” na ny Fanjakan’Andriamanitra no nandrasan’i Abrahama nandritra ny androm-piainany. “Andriamanitra no mpanorina sy mpanao azy io.” (Heb. 11:10) Toy ny efa hitan’i Abrahama sahady io tanàna io. Nino ny fitsanganana amin’ny maty izy sy Abela, Enoka, Noa, ary ny mpanompon’i Jehovah hafa. Nanantena izy ireo fa hiaina eto an-tany rehefa hanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra. Vao mainka nino an’i Jehovah izy ireo rehefa nisaintsaina an’izany fitahiana izany.—Vakio ny Hebreo 11:15, 16.
10. Nahoana no nahasoa an’i Saraha ny nisaintsaina hoe mbola hanan-janaka izy?
10 Tena nino an’i Jehovah koa i Saraha vadin’i Abrahama. Mbola tsy niteraka izy tamin’izy 90 taona nefa azony an-tsaina hoe mbola hanan-janaka izy. Toy ny efa hitany mihitsy aza hoe lasa firenen-dehibe ny taranany. (Heb. 11:11, 12) Nahoana izy no tena nino an’izany? Satria efa niteny tamin’ny vadiny i Jehovah hoe: “Hitahy azy aho, ka hanome anao zazalahy avy aminy. Eny, hitahy azy aho ka hisy firenena maro sy mpanjakan’ny firenena maro hipoitra avy aminy.” (Gen. 17:16) Nihamafy ny finoan’i Saraha hoe ho tanteraka izay nampanantenain’i Jehovah, rehefa teraka i Isaka. Vao mainka koa isika hino hoe tena ho tanteraka ny fampanantenan’i Jehovah, raha maka sary an-tsaina azy ireny isika.
NIBANJINA TSARA AN’ILAY VALISOA IZY
11, 12. Inona no nahatonga an’i Mosesy ho tia an’i Jehovah?
11 Nino ny fampanantenan’i Jehovah koa i Mosesy ka lasa tena tia azy. Fianakavian’ny mpanjakan’i Ejipta izy mandra-pahalehibeny, ka nety ho mora tia fahefana sy harena. Azo antoka anefa fa nampianatra azy momba an’i Jehovah sy ny fikasany ny ray aman-dreniny niteraka azy. Fantany àry fa hafahana tsy ho andevo sy hoentina any amin’ny Tany Nampanantenaina ny vahoakan’i Jehovah. (Gen. 13:14, 15; Eks. 2:5-10) Nisaintsaina matetika ny fitahiana miandry azy ireo i Mosesy ka lasa tena tia an’i Jehovah fa tsy nitady laza.
12 Hoy ny Baiboly: “Finoana no nandavan’i Mosesy tsy hatao hoe zanaky ny zanakavavin’i Farao, rehefa nihalehibe izy. Naleony nampijalina niaraka tamin’ny vahoakan’Andriamanitra, toy izay hifaly vetivety tamin’ny fahotana. Taminy mantsy, dia harena lehibe noho ny zava-tsarobidin’i Ejipta ny latsa nozakain’ilay Voahosotra, satria izy nibanjina tsara ny fanomezana an’ilay valisoa.”—Heb. 11:24-26.
13. Nahoana no nahasoa an’i Mosesy ny nisaintsaina lalina ny fampanantenan’Andriamanitra?
13 Vao mainka i Mosesy nino an’Andriamanitra sy tia azy rehefa nisaintsaina lalina an’izay nokasainy hatao ho an’ny Israelita. Azo inoana koa fa nahazo sary an-tsaina an’ilay fotoana hanafoanana ny fahafatesana izy, toy ny mpanompon’i Jehovah hafa. (Joba 14:14, 15; Heb. 11:17-19) Hitany fa nangoraka ny Israelita sy ny olombelona rehetra i Jehovah, ka tsy mahagaga raha lasa tia sy nino azy izy. Nandrisika an’i Mosesy hanompo azy foana izany. (Deot. 6:4, 5) Tsy natahotra àry izy na dia nandrahona ny hamono azy aza i Farao. Azo inoana fa nanampy azy koa ny naka sary an-tsaina ny valisoa ho azony.—Eks. 10:28, 29.
SAINTSAINO IZAY HATAON’ILAY FANJAKANA
14. Inona no zavatra nofinofisin’ny olona nefa tsy hisy mihitsy?
14 Maro no manonofinofy zavatra tsy hisy mihitsy. Misy, ohatra, mahantra nefa mieritreritra ny ho lasa mpanankarena be sy tsy hanana ahiahy. “Feno zava-tsarotra sy fijaliana” anefa ny fiainana ankehitriny. (Sal. 90:10) Mihevitra ireny olona ireny fa hihatsara ny fitondran’olombelona indray andro any ka tsy hisy hampanahy azy intsony. Ny Fanjakan’Andriamanitra ihany anefa no lazain’ny Baiboly hoe azo antenaina. (Dan. 2:44) Maro no mieritreritra fa tsy handrava an’ity tontolo ity Andriamanitra, nefa tsy izany mihitsy no resahin’ny Baiboly. (Zef. 1:18; 1 Jaona 2:15-17) Ho diso fanantenana izay mihevitra fa tsy ho tanteraka ny fikasan’i Jehovah.
Azonao sary an-tsaina ve ny tenanao ao amin’ny tontolo vaovao? (Fehintsoratra 15)
15. a) Nahoana no mahasoa antsika ny misaintsaina ny fanantenantsika? b) Inona no zavatra antenainao hitranga ao amin’ny tontolo vaovao?
15 Mampahery antsika Kristianina ny maka sary an-tsaina ny hoavy, na manantena ho any an-danitra isika na ho eto an-tany. Azonao an-tsaina ve ianao mankafy ny zavatra nampanantenain’i Jehovah? Ho faly ianao raha misaintsaina an’izay hataonao rehefa tanteraka ny fampanantenany. Toy ny efa hitanao angamba ianao miaina mandrakizay eto an-tany. Eritrereto hoe miara-miasa mba hanova ny tany ho Paradisa ianao sy ny olon-kafa. Tia an’i Jehovah hoatr’anao ny olona rehetra. Salama sy matanjaka ianao ary tsy manana ahiahy. Tena miahy anao ireo manara-maso an’ilay asa ka mahafinaritra erỳ ny fiainana. Faly koa ianao mampiasa ny talentanao sy ny fahaizanao mba hahasoa ny hafa sy hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra. Mety hanampy an’ireo hatsangana amin’ny maty mba hahalala an’i Jehovah, ohatra, ianao. (Jaona 17:3; Asa. 24:15) Tsy manonofy ianao raha misaintsaina zavatra mahafinaritra toy izany. Mifanaraka amin’izay lazain’ny Baiboly mantsy izany.—Isaia 11:9; 25:8; 33:24; 35:5-7; 65:22.
RESAHO NY FANANTENANAO
16, 17. Nahoana no mahasoa antsika ny miresaka ny fanantenantsika?
16 Ho azontsika an-tsaina kokoa ny hoavy raha resahintsika amin’ny mpiray finoana izay tiantsika hatao rehefa tanteraka ny fikasan’i Jehovah. Marina fa tsy fantatsika hoe hanao ahoana marina ny fiainantsika amin’izany. Mifampahery anefa isika rehefa miresaka an’izay mety hitranga ao amin’ny tontolo vaovao. Hita amin’izany koa fa tena mino ny fampanantenan’i Jehovah isika. Nitsidika ny rahalahy tany Roma, ohatra, ny apostoly Paoly ary ‘nifampahery’ izy ireo. Azo antoka fa tena tian’izy ireo izany. (Rom. 1:11, 12) Tiantsika koa ny mifampahery, amin’izao fotoan-tsarotra izao.
17 Tsy dia hifantoka amin’ny olana ankehitriny koa isika raha misaintsaina ny fampanantenan’i Jehovah. Nanahy i Petera, indray mandeha, ka hoy izy tamin’i Jesosy: “Izahay efa nahafoy ny zava-drehetra ary nanaraka anao, koa inona no ho azonay?” Nampian’i Jesosy hisaintsaina ny hoavy àry i Petera sy ny mpianatra hafa. Hoy i Jesosy: “Lazaiko aminareo marina tokoa fa amin’ny fotoanan’ny fanavaozana, dia hipetraka eo ambony seza fiandrianany be voninahitra ny Zanak’olona. Amin’izay fotoana izay dia hipetraka eo ambony seza fiandrianana roa ambin’ny folo koa ianareo izay efa nanaraka ahy, ka hitsara ny foko roa ambin’ny folon’ny Israely. Ary izay rehetra efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako, dia hahazo be lavitra raha oharina amin’izay nafoiny, ary handova fiainana mandrakizay.” (Mat. 19:27-29) Afaka nisaintsaina an’izay hataony rehefa miara-manjaka amin’i Jesosy àry i Petera sy ny mpianatra hafa. Hanjaka amin’ny tany manontolo izy ireo, ary hanampy ny olona mankatò ho lavorary.
18. Nahoana no mahasoa ny misaintsaina ny fotoana hahatanterahan’ny fampanantenan’i Jehovah?
18 Nahasoa ny mpanompon’i Jehovah foana ny nisaintsaina ny fampanantenany. Nahafantatra ny fikasan’i Jehovah i Abela ka nisaintsaina an’izany. Nampiseho izy hoe nino an’izany sady tena natoky fa ho tanteraka izany. Nanam-pinoana i Abrahama ka nanao zavatra miavaka. Toy ny efa hitany mantsy hoe tanteraka ny fampanantenan’Andriamanitra momba an’ilay ‘taranaka.’ (Gen. 3:15) “Nibanjina tsara ny fanomezana an’ilay valisoa” i Mosesy. Nampiseho ny finoany izy ary lasa tia kokoa an’i Jehovah. (Heb. 11:26) Vao mainka koa isika hino an’i Jehovah sy ho tia azy rehefa maka sary an-tsaina ny fotoana hahatanterahan’ny fampanantenany. Mbola misy zavatra hafa azontsika alaina sary an-tsaina, araka ny ho hitantsika ao amin’ny lahatsoratra manaraka.